Vaovao - Fanoloran-tena hampitombo ny fampiasana loharanon-karena maharitra
Fanoloran-tena hampitombo ny fampiasana loharanon-karena maharitra
Ampitomboy ny fampiasana loharanon-karena maharitra
Ny entam-barotra sy ny fonosana rehetra, amin'ny alàlan'ny famindrana ireo fitaovana maharitra, mampihena ny enta-mavesatra amin'ny tontolo iainana, mampihena ny famokarana fako amin'ny tsingerin'ny fiainana ny entam-barotra, mampihena ny fampiasana solika voajanahary ary mandray anjara amin'ny fanatanterahana fiaraha-monina boribory.
2: Ny rano
Mampihena ny fampiasana rano, manamafy ny fitantanana ny rano maloto sy ny rano maloto,
Manoloana ny olana goavana eo amin'ny fihenan'ny rano sy ny fahasimban'ny kalitaon'ny rano dia manolo-tena amin'ny fampihenana ny habetsaky ny rano ilaina amin'ny famokarana sy ny asa ary ny fihenan'ny enta-mavesatry ny fako maloto.
· Ahena ny fanjifana rano amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny fahombiazan'ny rano sy ny fampiasana azy indray amin'ny toerana famokarana amin'ireo faritra misy olana amin'ny rano.
· Araho ny fenitry ny orinasa mifototra amin'ny lalànan'ny governemanta sy ny fitsipika ary ny fenitra indostrialy toa ny ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemical Substances) ary hampihatra ny fitantanana rano maloto amin'ny toerana famokarana rehetra.
Fitantanana sy fihenan'ny akora simika
Mba hiantohana ny fiainana manankarena ho an'ny taranaka ho avy, ny orinasa dia mampihena ny fiatraikany sy ny vesatry ny zavatra simika amin'ny tontolo iainana.
· Miorina amin'ny mari-pahaizana indostrialy toy ny MRSL (Lisitry ny zava-mahadomelina amin'ny ora famokarana) miorina amin'ny ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemical Substances), tantano ny fampiasana akora simika amin'ny lafiny rehetra amin'ny fizotry ny famokarana manomboka any ivelany mba hampihena bebe kokoa ny fampiasana ny akora simika.
· Manaraka ny fitsipiky ny indostria toy ny Standard 100 nataon'i Oeko-Tex hanafoanana ny fampiasana ireo zavatra voafetra amin'ny vokatra.
Mamolavola fomba fanamboarana vaovao hampihenana ny famoahana akora simika manimba.
Hajao ny zon'olombelona ary tazomy ny tontolo iainana madio sy azo antoka
Manome lanja ny foto-kevitra iraisan'ny rehetra momba ny fanajana ny fahamendrehana sy ny zon'ny olona rehetra izahay ary mandray anjara amin'ny fiaraha-monina marobe sy maharitra.
Amin'ny alàlan'ny fanekena sy fanajana ny zon'olombelona feno